Sharci cusub oo lagu soo rogay hoteellada Muqdisho kadib qaraxii Hotel Central – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Sharci lagula soconayo dadka dega hoteellada magaalada Muqdisho ayaa wasaaradda Amniga Gudaha Soomaaliya kusoo rogtay hoteelladaas, kadib markii bishii hore qaraxyo dad badan ku dhamaadeen ay ka dhaceen Hotel Central.
Sharcigan cusub ayaa dhigaya in la diiwaan-geliyo macaamiisha hoteellada, haddii loo baahdana su’aalo la weydiin karo.
Sidoo kale, wuxuu sharcigaan amarka ah dhigayaan in maamulka hotellada foomam ka buuxiyaan qof kasta oo degaya hoteelkooda, si loo ogaado wuxuu u socdo iyo halka uu ka yimid.
In hoteelada lagu xiro kaamirooyinka loo yaqaanno CCTV-ga ee ka dhaca waxa ka dhaca gudaha hoteelka ayaa ka mid ah qodobada uu sharcigaan cusub farayo milkiilayaasha hoteellada Muqdisho.
Hoteelada Muqdisho oo ay degan yihiin dad aad u fara badan oo u badan qurbojoog ayaa dowladda Soomaaliya u atagtay halis weyn kadib markii uu qarax weyn gudaha Hotel Central, iyadoo la sheegay iney is qarxisay haweeney ka shaqeyneysay hotelka oo ka timid dalka Holland.